Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo Ansaxiyey Golaha wasiirada Maamulkaas | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo Ansaxiyey Golaha wasiirada Maamulkaas
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo Ansaxiyey Golaha wasiirada Maamulkaas
Kulanka Baarlamaanka Puntland ayaa waxaa goob joog ka ahaa 64 Xildhibaan, iyadoo laga akhriyay taariikh nololeedka iyo waayo aragnimada qaar ka mid ah Golaha Wasiirada.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas ayaa ka codsaday Xildhibaanada inay ansixiyaan Golaha Wasiirada, isagoo xusay in Puntland ay xilligan ku jirto xaalad adag, isla markaana aysan ka bixi karin Xukuumad la’aan.
Tiradan Xildhibaanada codka siisay Golaha Wasiirada ayaa ka badan cododkii ay kalsoonida ku waayeen Golihii wasiirada ee Baarlamaanka codka kalsoonida uu kala laabtay 18 bishii July.
Dadweynaha Puntland ayaa is weydiinaya sida ay ku timid ansixinta Wasiiradan oo ay u badan yihiin xubnihii ay codka kalsoonida u diideen, waxaana soo baxaya warar sheegaya in lacag gaareysa $2 milyan oo dollar lagu bixiyay ansixinta Xukuumadda iyo heshiisyadii ay gashay.
Previous articleYuusuf Xasan ayaa mar kale difaacday Kursiga Xildhibaano ee degmada Kamakunji.
Next articleSharciga xakameynta Hubka Wax Dila Ayey Ansaxiyeen Golaha Wasiirada Soomaaliya.